Farmaajo oo Hambalyo u diray Madaxweyne Geelle oo markii 5-aad la doortay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Farmaajo oo Hambalyo u diray Madaxweyne Geelle oo markii 5-aad la doortay
Farmaajo oo Hambalyo u diray Madaxweyne Geelle oo markii 5-aad la doortay
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo markii 5-aad dib loogu doortay xilka Madaxweynaha.
Madaxweyne Farmaajo oo Qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ugu hambeeyay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo shalay ku guuleystay doorasho ka dhacday dalka Jabuuti.
Sidoo kale Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa waxaa uu guushii Madaxweynaha Jabuuti ku tilmaamay mid xoojineysa horumarka iyo xasilloonida Gobolka, isagoona xusay inuu ku kalsoon yahay horumarka iyo wax wada qabsiga dalalka Gobolka.
“Waa guul xoojinaysa horumarka iyo xasilloonida gobolka,Waxaan ku kalsoonahay in aad dardargelin doonto horumarka iyo wax wada qabsiga dalalka gobolka” ayuu yiri Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maqaal horeTaliska Booliska oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay Qaraxii Magaalada Baydhabo
Maqaal XigaWasiirka wasaarada dhalan yarada iyo ciyaarahaha dowlada Kg ayaa maanta tababar ka furay magalada barawe ee casimada dowladda KG